Wednesday June 24, 2020 - 11:11:13 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ururka Jaamacatal Carab ayaa yeeshay kulan uu uga hadlayay loollanka melleteri ee ka socda wadanka Liibiya ee dhaca mandiqadda Maqribul Islaami.
Shir ay aalladda Video-ga tooska ah ku yeesheen wasiirrada arrimaha dibadda dowladaha ku bahoobay Ururkan ayay diiradda ku saareen arrimaha wadanka Liibiya oo ah dal ay ku loolamayaan quwado caalami ah.
Kulankan oo qabashadiisa ay laheyd dowladda Masar ayaa lagasoo saaray bayaan aan loo dhameyn,bayaanka ayaa lagu sheegay in ay muhiim tahay sidii dhammaan ciidamada shisheeye ay uga bixi lahaayeen wadanka islamarkaana dib loogu bilaabi lahaa wadahadalladii udhaxeeyay kooxaha isku haysta talada wadanka Liibiya.
Wasiirada arrimaha dibadda ee inta badan dowladaha Khaliijka oo taageersan khaliifa xaftar ayaa soo dhoweeyay mowqifka Cabdi fataax Alsiis ee colaadda Liibiya waxayna sheegeen in ay bogaadinayaan kulankii Xaftar iyo Asiisi ku dhaxmaray magaalada Alqaahira.
Dowlado ay kamid yihiin Tuunis,Qadar iyo Liibiya ayaa isaga gaabsaday in ay saxiixaan bayaankii khitaamiga ahaa ee kasoo baxay shirkii ay internetka ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda Ururka Jaamacadda Carabta.
Taliska Cabdi fataax Alsiisi ayaa dhowaan sheegay in uu faragelin melleteri ku sameynayo Liibiya si uu u taageero xaftar waxaana laga digayaa in dagaal wakaaladeed uu turkiga iyo masar ku dhaxmaro bariga liibiya.
Xukuumadda alqaahira ayaa dhowr jeer ku celcelisay in magaalooyinka sirta iyo lajafrah ay yihiin khad cas oo kamid ah amniga dalka Masar.
40-kii maalmood ee lasoo dhaafay ayuu dagaalka liibiya ku socda wadiiqo guul u ah xukuumadda alwifaaq ee ay gadaal ka taaganyihiin dowladaha Turkiga,Imaaraatka carabta iyo talyaaniga waxaana guuldarrooyin dhabarka loo saariyay maleeshiyaadka xaftar ee taageerada ka helaya dowladaha khaliijka iyo ruushka.